Galmada Noocaan ah waxaa la sheegay in Uur lagu qaadi karo + Xeel-dheerayaal - iftineducation.com
Galmada Noocaan ah waxaa la sheegay in Uur lagu qaadi karo + Xeel-dheerayaal
iftineducation.com – Awoodda dareenka macaansi waxa uu ku xiran yahay sida ay isu haystaan labada isu galmoonaya iyo dhaqdhaqaaqooda xilliga ay galmadu dhacayso, taasi oo iyana ku xiran hadba aqoonta ay u leeyihiin arrintaasi.
Qaabka fududeeya in biyaha lagu tuuro gudaha hoose ee cambarku, waxa uu fududeeyaa inay Shahwadu u gudubto ilma-galeenka.
Ha yeeshee fursadda uur-qaadistu waxay yaraataa kolka la isticmaalo qaab keena inay Shahwadu dibadda u soo baxdo.
Ogoow qaabka ugu wanaagsan ee uur qaadista Haweeneyda waxaa lagu tilmaamay in uu yahay Qaab Galmoodka marka Haweeneydu ay Jiifto Ninkana uu ka sareeyo ee uu dul saaranyahay, waxaana lagu micneeyay in Xittaa ay Shahwada soo daadan kareynin durbaba.
DEG-DEG Qarax khasaare Xoogan gaystay oo ka dhacay Magaalada New york EE dalka Maraykanka & Dhismo burburay